के छ विप्लवको अबको दाऊ ? प्रहरीले बढायो निगरानी — Imandarmedia.com
के छ विप्लवको अबको दाऊ ? प्रहरीले बढायो निगरानी
काठमाडौ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तीन बुँदे सहमति पछि शान्तिपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम गर्दै जनतामा आफ्नो विचार प्रबाह गरिरहेको छ।
अहिले चलिरहेको संसदीय व्यवस्थाबाट देश र श्रमजिवी जनताले मुक्ती नपाउने भन्दै वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि एकीकृत जनक्रान्तिका मार्फत वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्दै संघर्ष गरिरहेको छ।
देशभर अभियान चलाएर संगठन विस्तारमा लागेको नेकपा केही महिनायता एमसीसी विरुद्धको संघर्षमा छ। व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदन भएपछि विप्लवको सक्रियता बढेको छ।
विप्लवले एमसीसीमा असन्तुष्ट नेताहरुलाई भेटेर माहोल बनाइरहेका छन्। त्यसको सुरुवात नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठबाट गरेका छन् । पार्टी विभाजनका लागि समेत तयार हुने भनेर माओवादीभित्र छुट्टै छलफल श्रेष्ठले चलाईरहेका बेला विप्लवले उनलाई भेटेर पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेका छन् ।
पार्टीमा अन्तरसंघर्ष चर्किरहेका बेला विप्लवसँग श्रेष्ठको अंकमालले माओवादीका धेरै नेतालाई झस्काएको छ। यसअघि श्रेष्ठको असन्तुष्टिमा खासै सिरियस’ नदेखिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वर्षमान पुनलगायतका नेताहरू हात्तीवनमा श्रेष्ठलाई भेट्न पुगे।
विप्लवले बुधबार नै श्रेष्ठपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे र प्रेम सुवालसँग भेट गरे। त्यस्तै साँझतिर एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग भेटघाट गरे।
दौडधुपलाई विप्लवले विहीबार पनि निरन्तरता दिएका छन्। उनले बिहीबार बिहानै नेकपा एमालेका नेता भीम रावलसँग भेटघाट गरेका छन्। विप्लवले पछिल्ला दुई दिनमा जति पनि नेताहरु भेटे ती सबै एमसीसीका कारण आफ्नो पार्टीभित्र रुष्ट छन्।
एमसीसीमा राष्ट्रघात भएको ठहर उनीहरुको छ। उनीहरुसँगै मोर्चाबन्दी गर्ने प्रयास विप्लवको छ। देशभक्त, राष्ट्रवादी र स्वाधीनताका पक्षधरहरू एकीकृत र ध्रुवीकृत हौँ,’ प्रायः सबै भेटमा विप्लवको साथमा रहेका नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले फेसबुकमा लखेका छन्।
एमसीसीविरोधी शक्तिलाई ध्रुवीकृत गरेर आन्दोलनको उठान प्रयास विप्लवले गरेका छन्। त्यसैअनुसार एमसीसीविरुद्ध खुल्लामञ्चमा भोलि सभासमेत हुँदैछ। जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनाल, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ र एमाले नेता रावलले पनि सम्बोधन गर्ने भएका छन्।
विप्लवकै प्रयासमा उनीहरू एउटै मञ्चमा सहभागी भएर भाषण गर्न तयार भएका हुन् । विप्लवले यसअघि नै साना वामदलको एमसीसीविरोधी मोर्चा बनाएका छन् । जसमा ६ साना वाम दल र २ मोर्चा छन् ।
हालै सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य, आहुतिलगायतको पार्टी पनि सामेल छ। मोर्चामा नरहेका अन्य फार्टीका ‘बिग फिगर’ को समेत साथ लिएर शक्ति बढाउँदै लैजाने रणनीति विप्लवको देखिन्छ।
६ राजनीतिक दल र दुईवटा मोर्चाको नेता बनेका विप्लव अहिले एमसीसी विरोधी मोर्चाको नेताका रुपमा स्थापित हुन खोज्दैछन्। यो कुराको पूर्वानुमान गरेको नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुको निगरानी बढाएको छ।
बस्ने ठाउँ, लगाउने लुगा र नियमित भेटघाट हुने आर्कहरुको बारेमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान विभागले निगरानी बढाएको श्रोतको दावि छ । एमसीसी संसदबाट पास भएपनि फिल्डमा लागु गर्न नदिने उद्घोष गरेपछि सरकारले अनुसन्धान विभागलाई निगरानी बढाउन निर्देशन दिएको सुरक्षा श्रोतको भनाई छ।
फिल्डमा समस्या आए पार्टीमाथि फेरी प्रतिबन्ध लगाउने र पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई गिरप्तार गर्न सजिलो होस् भनेर सरकारले पूर्वतयारी गरेको जानकारहरुको भनाई छ।
तेस्तै, नेकपाका महासचिव विप्लव, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी,
देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेल र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजक आहुतीले आज राष्ट्रघाती एमसीसीविरुद्ध काठमाडौँ खुलामञ्चमा सम्बोधन गर्दैछन्।
एमसीसीले संसद्‌वादी दलहरूबीच नै खैलाबैला मच्चाएर विभाजनतिर डोहोर्याइरहेको समयमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका यी ६ दलले दलले एमसीसी खारेजीका लागि आह्वान गर्दै आज मध्याह्न विशाल प्रदर्शन र विरोधसभा आयोजना गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्र, एमाले, एकीकृत समाजवदी, जसपा, लोसपालगायत सबै संसद्‌वादी दलभित्र एमसीसीका विषयमा फरक मत र सङ्घर्ष जारी छ। ती दलभित्रका तुलनात्मक रूपमा राष्ट्रवादी र देशभक्तहरूले एमसीसी पारित गर्ने कार्यको विरोध गरिरहेका छन्।
तेस्तै कतिपय पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र विद्रोह गर्दै क्रान्तिकारी–देशभक्त पार्टीमा ध्रुवीकृत हुन सुरु गरिसकेका छन्। राजमो, नेमकिपा, राप्रापालगायत दलले एमसीसीका विपक्षमा मत व्यक्त गरेका छन्।
संसद्‌वादी दलहरूले एमसीसीमा संसद्‌बाटै राष्ट्रघात गरेपछि ६ राजनीतिक पार्टी, २ मोर्चा र सिङ्गो देशभक्त जनसमुदाय आन्दोलित भइरहेको समयमा आज काठमाडौँमा व्यापक प्रदर्शनसहित विशाल विरोधसभा आह्वान गरिएको हो।